An ocelot in Zooparque, Itatiba, ဘရာဇီးနိုင်ငံ
F. chibi-gouazou (Gray, 1827)
F. pardalis (လင်းနီးယပ်၊ ၁၇၅၈)
ကျားသစ်ကွက်တောကြောင်၏ အပြင်အရေခွံသည် ကမ္ဘာ့ ဈေးကြီး သားရေအမျိုးအစားထဲတွင် ပါဝင်သောကြောင့် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက အမဲလိုက်အဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခံရသော တိရစ္ဆာန်များ ဖြစ်သည်။ အိမ်မွေးအနေနှင့်လည်း ဈေးကြီးပေး အိမ်မွေးတဲ့ အလေ့အထလည်း ရှိပါသေးသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၉၇၂ ခုနှစ်မှ စ၍ ကမ္ဘာ့အရှားပါးဆုံး တိရစ္ဆာန်၊ မထိခိုက်ရ တိရစ္ဆာန်အဖြစ် ယနေ့တိုင် သတ်မှတ်ထား သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ "Leopardus pardalis" (2015). IUCN Red List of Threatened Species 2015. IUCN.
↑ "Leopardus pardalis" (1997). Mammalian Species (548): 1–10. doi:10.2307/3504082.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကျားသစ်ကွက်တောကြောင်&oldid=710836" မှ ရယူရန်
ကာရစ်ဘီယံဒေသတွင် တွေ့ရှိရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၁:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။